I-Avalon Retreat Cabin - kwi-Central Glastonbury - I-Airbnb
I-Avalon Retreat Cabin - kwi-Central Glastonbury
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMei (May)
I-wifi ekhawulezayo ye-53 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
UMei (May) yi-Superhost
I-Avalon Retreat Cabin yindlu yamaplanga yabucala ethe cwaka embindini weGlastonbury. Umgama olula wokuhamba ukuya kwi-High Street, amabhodlo e-Abey, i-Chalice Well kunye ne-White spring ezantsi kwe-Tor edumileyo.
Isidlo sakusasa esisemgangathweni siyaqukwa ngoko nceda usixelele ukuba awunasidlo sakusasa, ungadli inyama, okanye awunayo i-gluten?
I-Resort inegadi yabucala, esecaleni komlambo osecaleni kweWhite Spring. Indawo efanelekileyo yokubukela izilwanyana zasendle okanye uphumle nje.
Nceda ujonge incwadi yethu ebonisa iindawo ukuze uphucule ukuhlala kwakho.
Indlu yamaplanga yindlu encinci esecaleni, esecaleni kwendlu yethu. Iyakhanya, ipholile kwaye ixhotyiswe ngebhedi elala abantu ababini, ishawa kunye nendlu yangasese, ikhitshi elincinci, i-intanethi ye-flat screen ye-TV eyi-32 ", i-Wi-Fi ye-Wi-Fi yasimahla kunye nokufudumeza umbane. Kukho neveranda yakho enendawo yokuhlala kunye negadi yabucala apho ungahlala khona ngasemlanjeni onamanzi avela kwi-White Spring.
Isitrato sethu simahla ukupaka imoto yakho ngenkathalo.
Siza kuyilungisa indlu yamaplanga ngesidlo sakusasa esisemgangathweni. Nceda usazise ukuba awunangxaki, ungadli inyama, ungadli inyama okanye awunayo i-gluten?
4.95 · Izimvo eziyi-400
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi400
I-Avalon Retreat ikwisitrato esipholileyo sokuhlala esikufutshane, okulula ukuhamba ngeenyawo ukusuka embindini wedolophu kunye nazo zonke iindawo ezinomtsalane zeAbbey, iGlastonbury Tor, iChalice Well & the White Spring, iibhari, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela kunye neekhefi. Akukho nzima ukuwufumana umculo, iibhari zethu zasekuhlaleni zibuka iindwendwe kumatheko nakumatheko unyaka wonke.
Imiqolomba yeCheddar Gorge kunye nokuhambahamba kunye neShapwick Nature ikumgama omfutshane ngemoto. Iibhafu ezinembali, iBristol, iMatshihendge, iAvebury kunye nolwandle zonke zikumgama weyure ngemoto.
Sicebisa ukuba uye ku-www.glastonburyoracle.co.uk ukuze wazi ngamanye amatheko asekuhlaleni, iintlanganiso okanye unyango oluza kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho.
Jonga incwadi yethu ebonisa iindawo ukuze uphucule ukuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Mei (May)
Sithanda ukwamkela iindwendwe zethu size siziqhelanise nendlu yamaplanga.
Siyazihlonipha izinto eziyimfihlo zeendwendwe kodwa sisoloko sifumaneka ukuba kukho nantoni na efunekayo.
Indlu yamaplanga iye yaphuculwa xa kucocwa ngaphambi kokwamkela ezinye iindwendwe.
Sinikisa ngendlu yamaplanga ngesidlo sakusasa esisemgangathweni ukuze uhlale. Nceda usixelele ukuba awunayo na inyama, abangayityiyo inyama, abangayityiyo inyama okanye abangayityiyo inyama?
Siyazihlonipha izinto eziyimfihlo zeendwendwe kodwa sisoloko sifumaneka ukuba kukho nantoni na efunek…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Glastonbury